China Sodium Bicarbonate Nlụpụta na Factory | Ntinye
Aha ndi ozo: Soda, Sodium Bicarbonate, sodium acid carbonate
Usoro kemịkal: NaHCO₃
Mloecular ibu: 84.01
Ebe mgbaze: 270 ℃
Ebe esi: 851 ℃
Solubility: soluble na mmiri, unyi anaghị edozi na ethanol
Njupụta: 2.16 g / cm
Ọdịdị: ọcha kristal, ma ọ bụ opacity monoclinic crystal
Isi na-agbaze: 270 ℃
Isi mmiri: 851 ℃
White crystal, ma ọ bụ opaque monoclinic crystal mma crystal, ísì ụtọ, nnu, soluble na mmiri, unyi anaghị agbasa na ethanol. Solubility n'ime mmiri bụ 7.8g (18℃) na 16.0g (60℃).
Ọ kwụsiri ike na ọnọdụ okpomọkụ ma dị mfe nrụrụ mgbe ewe iwe. Ọ na-ere ngwa ngwa na 50℃ na-efunahụ carbon dioxide kpamkpam na 270℃. Enweghị mgbanwe ya na ikuku akọrọ ma jiri nwayọọ nwayọọ na-agbawa na ikuku dị nro. Ọ nwere ike imeghachi ya na asid na ntọala. Na-emeghachi na acid iji mepụta nnu kwekọrọ, mmiri na carbon dioxide, ma na-emeghachi na ntọala iji mepụta carbonates na mmiri kwekọrọ na ya. Na mgbakwunye, ọ nwere ike meghachi omume na ụfọdụ nnu ma nwee hydrolysis okpukpu abụọ na aluminom chloride na aluminom chlorate iji mepụta aluminom hydroxide, sodium salts na carbon dioxide.
Ọdịnaya (Dị ka NaHCO3 %)
Oké ígwè (Pb%)
Efu nke ihicha%
AKW SKWỌ NWA%
1）Gas na-adọ carbonization
A na-edozi carbonium sodium carbonized site na carbon dioxide na ụlọ elu carbonization, wee kewaa ya, mịrị amị ma gwerie ya, enwetara ngwaahịa ahụ.
2)Gas siri ike na-adọ carbonization
A na-etinye sodium carbonate na akwa mmeghachi omume, jikọtara ya na mmiri, carbon dioxide na-ekpo ọkụ site n'akụkụ ala, kpoo ma gwerie ya mgbe carbonization gasịrị, a na-enwetakwa ngwaahịa ahụ emechara.
1, industrylọ ọrụ ọgwụ
Enwere ike iji sodium bicarbonate mee ihe ozugbo dị ka ihe akụrụngwa na ụlọ ọrụ ọgwụ na-agwọ gastric acid overload; eji dika akụrụngwa maka ịkwadebe acid.
2) Nhazi nri
Na nhazi nri, ọ bụ otu n’ime ihe ndị eji atọghekarị, ejiri mee biscuits, achịcha na ihe ndị ọzọ, bụ carbon dioxide dị na soda ọ inụ drinksụ; Enwere ike ịgbakwunye ya na alum maka alkaline ntụ ntụ, ma nwee ike jikọta ya na soda soda maka soda obodo. Enwere ike iji ya dị ka ihe eji egbochi butter.
3) Ngwa akụrụngwa
Ejiri mee ihe na mmepụta nke acid na alkali ọkụ na-egbu ọkụ na ụfụfụ ọkụ ụfụfụ.
4) Rubber ụlọ ọrụ nwere ike iji maka roba, ogbo mmepụta;
5) Metallurgical ụlọ ọrụ nwere ike iji dị ka a igba maka mgbatị ígwè ingots;
6) Mechanical ụlọ ọrụ nwere ike ji mee ihe nkedo ígwè (foundry) ájá akpụzi auxiliars;
7) Printing na dyeing ụlọ ọrụ nwere ike ji mee ka e ji esiji ebi akwụkwọ gwara gwara gị n'ụlọnga, acid na alkali echekwa, ákwà dyeing na finishing nke n'azụ ọgwụgwọ gị n'ụlọnga;
8) Industrylọ Ọrụ Ahịa, a na-agbakwunye soda na usoro dyeing iji gbochie gbọm yarn na-emepụta okooko osisi agba.
9) N'ime ugbo, enwere ike iji ya dị ka ihe nhicha maka ajị anụ na ịmị mkpụrụ.
Nwee ihe karịrị afọ 15 ọkachamara na mmepụta nke Sodium Bicarbonate;
n'ihi ịbịaru nso n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, hụ na ọnụahịa asọmpi
Okwu chọrọ nlebara anya
Kewapụ ebe a na-eri nri na-egbochi ya ma gbochie ịnweta. Zere ájá, jiri nlezianya zaa, tinye n'ime akpa ma bufee ya na ebe nchekwa. Ọ bụrụ na ọnụọgụ mmiri dị ukwuu, kpuchie ya na mpempe akwụkwọ plastik na kwaaji.
Sodium bicarbonate bụ nke ngwongwo na-adịghị ize ndụ, mana ekwesiri igbochi ya ka ọ ghara iru mmiri. Ejighi agwakọta mmiri soda na ihe ndi nwere nsi iji gbochie mmetọ.
Nke gara aga: Soda Ash
Osote: Sodium Metabisulphite
Zụrụ Carbonate Sodium
Ahịa Sodium Carbonate
Hydrosulfite, Calcium Bromide Ngwọta, Natrium Hydrosulfite, Calcium Bromide Anhydrous, Calcium Bromide mmiri mmiri, Hydrosulfite De Sodium,